Hotmail Nbanye Usoro | Banye Hotmail & Password Recovery
January 14, 2020 site HOTMAIL255 Nkume a Comment
Ị chọrọ kwesịrị ekwesị ndu n'ihi na Hotmail Banye? Gaa site n'isiokwu a nke m kere iji nye gị kwesịrị ekwesị na zuru ezu ozi banyere Olee otú Nbanye Hotmail Account. Ọ bụrụ na ị kere gị Hotmail akaụntụ wee pịa Ebe a ka Mepụta Hotmail Account mbụ. Tulee MyHR CVS Were n'Ọrụ Banye
Ebe m na-enye zuru ezu Usoro maka Hotmail Password Recovery nwekwara. Ị ga-eso nke a Hotmail Password Tọgharia hazie nnọọ nlezianya na ị ga-enye ihe ọmụma ziri ezi ka ihe ịga nke ọma naghachi gị Hotmail Password.
Ị na-ahụ Hotmail Nbanye Usoro dị mfe ke ibuotikọ. M ji a nnọọ mfe asụsụ na ike a na isiokwu nke onye ọ bụla nwere ike ịghọta mfe. Soro nzọụkwụ site nzọụkwụ ngwa ngwa ndu na mgbe na-emecha usoro ị banyere gị Hotmail Igbe mbata.
Gaa site n'elu na ala nke isiokwu a ma mara banyere zuru ọmụma nke Olee otú Banye n'ime Hotmail Account ma napụta Hotmail Password. Ị ga-eji gị Aha ojii na Password ị natara mgbe ị kere akaụntụ gị nbanye gị Hotmail Igbe mbata.
Hotmail Nbanye Usoro | Ụkwụ na Ụkwụ site Ụkwụ na Ụkwụ Usoro
Ele anya na n'okpuru aha nzọụkwụ maka Hotmail Banye. Soro nzọụkwụ dị ka e kwuru na mezue ya nke ọma ka Banye Hotmail Account.
Tinye na Hotmail nbanye ukara portal: www.outlook.com.
ugbu a, pịa na “banye” button ịbanye nbanye page.
ugbu a, tinye Email, ekwentị, or Skype in the given space and press “Osote”.
ugbu a, Tinye paswọọdụ gị nlezianya nyere ohere na pịa “Osote”.
N'ikpeazụ, mgbe na-emecha niile n'elu nzọụkwụ ị ga-aba gị Hotmail Account.
Hotmail Password Recovery Usoro
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-echefu paswọọdụ gị mgbe echegbula, na-eso nzọụkwụ kpọrọ aha n'okpuru na paswọọdụ gị ga-natara mfe.
First, tinye ukara Hotmail website site click ebe a: www.outlook.com.
ugbu a, pịa Banye na tinye Email, ekwentị, ma ọ bụ Skype ma pịa “Osote”.
ugbu a, mgbe na click na “Echefu m paswọọdụ” nhọrọ imeghe Password mgbake usoro.
ugbu a, ị ga-ahụ a page kwuru Dịghachi akaụntụ gị na-ama banyere email id, pịa “Osote”.
ugbu a, ebe a ị na-abanye na-dị iche iche email address si onye ị na-agbalị na-agbake paswọọdụ maka na-abanye na odide ị na-ahụ ohere nyere ma pịa “Osote”.
Mgbe nke ahụ mechara, ị ga-enweta a koodu na dị iche iche email address ị banyere, tinye na koodu na pịa “nyochaa” button.
ugbu a, tinye ozi nkeonwe gị na dị ka aha mbụ, Aha ikpeazụ, Ụbọchị ọmụmụ, Country / Region, State / Territory, na koodu nzi ozi na pịa “Osote”.
ugbu a, na peeji a mbụ, tinye ọzọ okwuntughe ị na-eji maka nke a na akaụntụ, wee họrọ na ị na-eji ihe ọ bụla nke dị n'okpuru banyere Microsoft ngwaahịa na akaụntụ gị. Na n'ikpeazụ họrọ “ebe” ma ọ bụ “No” nke ajụjụ ahụ “Ò nwetụla mgbe ị zụrụ ihe si Microsoft tupu” na pịa “Osote”.
ugbu a, na ikpeazụ nzọụkwụ, i nwere ịbanye Email adreesị ị na-adịbeghị anya zitere ozi ịntanetị. Na kwa kpọmkwem isiokwu edoghi gị na nso nso zitere ozi ịntanetị.
N'ikpeazụ, Ozi gị e osụk na ọ ga-ewe banyere 24 awa inyocha gị osụk ọmụma.
Isiokwu a bụ banyere Hotmail Nbanye Usoro na Hotmail Password Recovery Usoro. M ka m mere isiokwu a na a mfe nzọụkwụ site nzọụkwụ style mfe ịghọta. Ị na-nnọọ na-eso nzọụkwụ na mezue usoro ọma Banye Hotmail Account.
N'ihi na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ na ị chọrọ inye gị nzaghachi banyere isiokwu a-enye ya na-eji n'okpuru aha comment igbe. Ma na-a mgbe nile update na anyị website. Ọzọkwa elele gmail ndu n'ihi na gmail nbanye dị iche iche ọrụ
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Banye tagged With: Hotmail Password Recovery, Olee otú Nbanye Hotmail Account, Nbanye Hotmail akaụntụ, Banye Hotmail akaụntụ
Tọgharia Yahoo Mail Password | Olee otú Gbanwee Yahoo Mail Password
Outlook Banye | Banye Outlook Account – Ndenye Guide
Olee otú Mepụta Hotmail Account | Complete Guide to Banye Up